Kedu ihe bụ nwa jaundice na kedu ka ị ga-esi zere ya? – Noor Health Life
Kedu ihe bụ nwa jaundice na kedu ka ị ga-esi zere ya?
Ịba ọcha n’anya C, nke a makwaara dị ka ịba ọcha n’anya C, bụ ọrịa imeju nke nwere ike ịkpata mmebi imeju siri ike. Ọ bụ nje ịba ọcha n’anya C ma ọ bụ HCV kpatara ya.
Jaundice ma ọ bụ ịba ọcha n’anya C nwere ike ịdị njọ (obere oge) ma ọ bụ na-adịghị ala ala (na-adịghị ala ala). Mgbe mmadụ nwere nnukwu ịba ọcha n’anya, mgbaàmà ahụ nwere ike ịdịru ọnwa isii.
Ọrịa siri ike na-adị ala ala ma ọ bụrụ na ahụ enweghị ike ikpochapụ nje ahụ. Nke a bụ ihe nkịtị – ọrịa siri ike na-adị ala ala karịa 50% nke ikpe.
Ijikwa na mgbochi ọrịa dị ka Noor Health Life si kwuo, ihe ka ọtụtụ n’ọrịa ịba ọcha n’anya C taa na-ebute site na ịkpọtụrụ agịga ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ eji eme ma ọ bụ ịgba ọgwụ. Nke a na-abụkarị n’ihi iji agịga ma ọ bụ kọntaktị mberede na ntọala ahụike.
Kedu ihe mgbaàmà nke jaundice?
Kedu ka ị ga-esi nweta jaundice ojii?
Ị nweghị ike nweta jaundice ojii n’ụzọ ọ bụla
Mgbaàmà nke jaundice ojii siri ike
Nchọpụta nke jaundice
Kedu mgbe ị ga-ahụ dọkịta gị?
Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ihe mgbaàmà nke ịba ọcha n’anya C ma ọ bụ jaundice ojii. Mana n’etiti izu abụọ na ọnwa isii ka nje virus batara n’ọbara gị, ị nwere ike ịhụ:
Ihe mkpofu dị ka ala
Njikọta (ọnọdụ nke na-eme ka anya na akpụkpọ ahụ na-acha odo odo yana mmamịrị ojii)
Ihe mgbu afọ
Mgbaàmà na-adịrukarị izu 2 ruo 12
Nwa jaundice na-agbasa mgbe ọbara ma ọ bụ mmiri ara nke nje nje ịba ọcha n’anya C na-abanye n’ọbara gị site na ịkpọtụrụ onye bu ọrịa ahụ.
: Ị nwere ike ibunye nje ahụ n’ụzọ ndị a
Iji otu ọgwụ injection na agịga
Inwe mmekọahụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere nje HIV
Ọmụmụ – nne nwere ike inyefe nwa ya
Iji otu efere nri
Flatulence ma ọ bụ ọzịza nke ụkwụ na ụkwụ
Ụbụrụ gị anaghị arụ ọrụ (encephalopathy)
Ọbara na ọnya n’ụzọ dị mfe
Ihe isi ike na ebe nchekwa na itinye uche
Veins dị ka eriri ududo na akpụkpọ ahụ
Ọbara n’ime esophagus dị ala n’ihi ọbara ọgbụgba (ụdị esophageal)
N’ihi na ọrịa HCV ọhụrụ na-abụkarị asymptomatic, mmadụ ole na ole ka a na-achọpụta mgbe ọrịa ahụ dị ọhụrụ. N’ime ndị nwere ọrịa HCV na-adịghị ala ala, a na-achọpụtakarị ọrịa ahụ n’ihi na ọ na-anọgide na-adịghị ahụkebe ruo ogologo oge mgbe ọrịa ahụ gasịrị, ọbụlagodi mgbe mgbaàmà nke abụọ na-emebi imeju siri ike.
A na-achọpụta ọrịa HCV n’ụzọ abụọ.
1. Nnwale ọgwụ mgbochi HCV na nyocha serological na-achọpụta ndị butere nje a.
2. Ọ bụrụ na ule ahụ dị mma maka ọgwụ mgbochi HCV, a chọrọ nyocha nucleic acid maka HCV ribonucleic acid (RNA) iji gosi na ha nwere ọrịa na-adịghị ala ala, ebe ihe dị ka pasent 30 nke ndị bu HCV bu ọrịa na-apụ n’enweghị. ọrịa ahụ. Ọ bụ ezie na ndị a enwekwaghị mmetụta ọzọ, ha ka ga-egosipụta nyocha dị mma maka ọgwụ mgbochi HCV.
Ozugbo a chọpụtara na mmadụ nwere ọrịa HCV na-adịghị ala ala, ekwesịrị ịme nyocha iji chọpụta ogo mmebi imeju (fibrosis na cirrhosis). Enwere ike ime nke a site na biopsy imeju ma ọ bụ ule dị iche iche na-adịghị emerụ ahụ. A na-eji ogo nke mmebi imeju na-eduzi mkpebi ọgwụgwọ na njikwa ọrịa.
Nchọpụta mbụ nwere ike igbochi nsogbu ahụike nke nwere ike ịpụta site na ọrịa ma gbochie mgbasa ozi nje. WHO tụrụ aro ka a nwalee ndị nọ n’ihe ize ndụ ka ukwuu nke ibute ọrịa.
Ọrịa ọhụrụ nwere HCV anaghị achọ ọgwụgwọ mgbe niile, n’ihi na n’ụfọdụ ndị nzaghachi mgbochi ọrịa ga-ekpochapụ ọrịa ahụ. Agbanyeghị, mgbe ọrịa HCV na-adịghị ala ala, ọgwụgwọ dị mkpa. Ebumnuche nke ịgwọ jaundice bụ iji gwọọ ọrịa ahụ.
Ndị WHO na-akwado ọgwụgwọ Pan Genotypic Direct Acting Antiviral (DAA) maka ndị gafere afọ 12. DAAH nwere ike ịgwọ ọtụtụ ndị nwere ọrịa HCV, na oge ọgwụgwọ dị mkpụmkpụ (na-abụkarị izu 12 ruo 24), dabere na enweghị ma ọ bụ ọnụnọ nke cirrhosis.
Pan-genotype DAA dị ọnụ ala karịa na mba ndị na-akpata ego dị elu na nke etiti. Agbanyeghị, iwebata ụdị ọgwụ ndị a n’ozuzu ebutela ọnụ ahịa mbelata dị egwu n’ọtụtụ mba (karịsịa mba ndị na-akpata obere ego na ndị na-akpata obere ego n’etiti).
Ịnweta ọgwụgwọ HCV na-akawanye mma mana ọ dị oke oke. N’ime nde mmadụ 58 bu ọrịa HCV n’ụwa niile na 2019, ihe dị ka 21% (nde 15.2) maara nchoputa ha, yana n’ime ndị a chọpụtara na ha nwere ọrịa HCV na-adịghị ala ala Ka ọ na-erule njedebe nke 2019, ihe dị ka 62% (nde 9.4) nke ndị mmadụ achọpụtala. emeso ya na DAA.
Enweghị ọgwụ mgbochi dị irè megide ịba ọcha n’anya C, yabụ mgbochi na-adabere na nhazi ahụike yana ibelata ihe ize ndụ nke nje na ọnụ ọgụgụ ndị nwere nnukwu ihe ize ndụ. Nke a na-agụnye ndị na-agba ọgwụ ọjọọ na ndị ikom na-enwe mmekọahụ na ụmụ nwoke, karịsịa ndị bu nje HIV ma ọ bụ ndị na-ebu ụzọ kpughee prophylaxis megide nje HIV.
: Gụnyere usoro mgbochi
Ojiji nke ntụtụ nlekọta ahụike na nchekwa nke ọma
Ijikwa na mkpofu ihe dị nkọ na ihe mkpofu n’enweghị nsogbu
Nye ndị na-agba ọgwụ ike ọrụ mgbochi zuru oke
Onyinye ọbara maka HCV na HBV
Ọzụzụ ndị ọrụ ahụike na
Mgbochi nke ọbara ọgbụgba n’oge mmekọahụ
Ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà nke nwa jaundice ma ọ bụ na-eche na ekpughere gị na nje virus, mee oge maka nyocha ihe na-akpata na ọgwụgwọ jaundice na ndị okenye.
Jaundice na ndị okenye ma ọ bụ nke a na-akpọkwa jaundice ma ọ bụ jaundice bụ ọrịa a na-ahụkarị na ụmụ amụrụ ọhụrụ mana nwere ike imetụta ndị mmadụ n’oge ọ bụla. Ọ dị mkpa ịhụ dọkịta ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà ọ bụla nke jaundice. Na ndị okenye, jaundice nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke imeju, ọbara ma ọ bụ nsogbu akwukwo.
Ihe na-akpata jaundice na ndị okenye
Jaundice na-apụta mgbe ọnụ ọgụgụ rubin pusi na-abawanye. Cat rubin bụ ihe na-acha odo odo ruo oroma n’ime ọbara nke dị na mkpụrụ ndụ ọbara uhie. Mgbe mkpụrụ ndụ ndị a nwụrụ, imeju na-enyocha ha site na ọbara. Ma ọ bụrụ na ntụpọ amalite na usoro a, mgbe ahụ, imeju adịghị arụ ọrụ nke ọma na rubbins na-amalite ịmalite n’ọtụtụ buru ibu nke na-eme ka akpụkpọ ahụ pụta ìhè odo.
Jaundice adịghị adịkarị na ndị toro eto ka ọ na-adịkarị na ụmụaka, ma ọ nwere ike ịkpata ọtụtụ ihe. Nkọwa nke ụfọdụ n’ime ha bụ ndị a:
* Ịba ọcha n’anya: Ọ na-abụkarị nje na-ebute ọrịa a, ọ pụkwara ịdịte aka ma ọ bụdị adịte aka. Nke pụtara na ọ nwere ike ịdịru ọnwa isii. Iji ọgwụ ụfọdụ na nsogbu sistemu ahụ ji alụso ọrịa ọgụ nwere ike ibute ịba ọcha n’anya ka oge na-aga, ịba ọcha n’anya nwere ike ibu ụzọ mebie imeju ma bute ịba ọcha n’anya.
* Ihe mgbochi nke bile ducts: Ndị a bụ ọwara mmiri dị warara nke mmiri a na-akpọ bile na-agba. Ọdọ mmiri ndị a na-ebuga bile site na imeju wee pụọ na eriri afọ. Mgbe ụfọdụ, ọrịa imeju na-egbu egbu na-egbochi nkume gallstone ndị a. Ọ bụrụ otú ahụ, ha nwere ike ịkpata jaundice.
* Ọrịa cancer pancreatic: Ọ bụ ọrịa kansa nke iri na-adịkarị na ụmụ nwoke na nke itoolu na-adịkarị na ụmụ nwanyị, ọ nwekwara ike igbochi bile ducts, nke nwere ike ibute jaundice.
* Iji ọgwụ ụfọdụ eme ihe: Penicillin, ọgwụ mgbochi ịmụ nwa na iji steroid jikọtara ya na ọrịa imeju.
Mgbaàmà nke Jaundice
* Agba odo na akpụkpọ na-acha ọcha nke anya.
* Ọgbụgbọ ma ọ bụ vomiting
* Mbelata ibu
* Ahụ ọkụ
* Ọchịchịrị nke ụcha mmamịrị.
Ndị dọkịta na-anwale rubin nwamba mgbe akara jaundice pụtara, nke na-egosi oke ihe dị n’ọbara. Ọ bụrụ na onye ọrịa ahụ nwere jaundice, ọnụọgụ pubin n’ọbara ya ga-akawanye njọ. Ndị dọkịta nwere ike inye iwu nyocha na nyocha ndị ọzọ iji chọpụta maka imeju mgbe ha chọpụtachara ihe mgbaàmà ahụ. A na-emekwa CBC iji chọpụta ihe kpatara a na-agụ mkpụrụ ndụ ọbara.
Iji gwọọ ya, ọ dị mkpa ịmata ihe kpatara ya ma gwọọ ya. Ọ bụrụ na ịba ọcha n’anya na-akpata jaundice, jaundice ga-agwọta n’onwe ya ozugbo ọrịa ahụ na-apụ, imeju na-amalite ịrịa.
Ọ bụrụ na enwere ihe mgbochi ọ bụla na bile duct ma kpatara jaundice, dọkịta ga-emepe ụzọ ahụ site na ịwa ahụ, olee nri bụ ọgwụgwọ ebumpụta ụwa maka jaundice?
A na-eji nri na-agwọ “Jaundice” nke ọma karịa ọgwụ. Ụfọdụ ịkpachara anya dị mkpa na ọrịa a. Ndị ọrịa nwere jaundice kwesịrị ịzere mgbatị ahụ ọ bụla n’oge ọrịa ahụ. Jiri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri amịpụtara kama iji nri esiri esi na nnu, ose na mmanụ. N’okpuru ebe a bụ ụfọdụ mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na herbs bụkwa nri maka ndị ọrịa na ọgwụgwọ ọrịa ahụ.
Iji ice emebiga ihe ókè na-ebute mbufụt na imeju. Zere ya dị ka o kwere mee, erila ọkụkọ ma ọ bụ ihe oriri dị arọ, ọ na-emetụta ọrụ imeju, ya mere, jiri naanị ihe oriri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi.
Beecha skwọsh ahụ n’ime obere iberibe ma sie nri ruo mgbe ọdịnaya abụba na-abaghị uru. Tinye coriander, cumin ọcha, ginger, ose oji, nnu dị nro na galik. Etinyekwala chilie na-acha uhie uhie ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ụdị ọ bụla na-esi ísì ụtọ na pickles. Mgbe ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ nke oke agụụ gachara, rie achịcha abụọ, porridge, lentil ahụekere na osikapa, ọbụlagodi na obere nha. Radish, karọt, kukumba, gourd, zukini nwekwara ike sie ya ma ọ bụ nke raw na-enweghị ose na ngwa nri dị ọkụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta nke adịghị ike, ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị na-eri mmanụ aṅụ dị ọcha na nri.
Mee kọfị site n’itinye ọkara ginger fennel nke ọma, otu teaspoon na akwụkwọ mint iri n’ime mmiri 250 ml ma ṅụọ otu iko, ugboro atọ ruo anọ n’ụbọchị na-enweghị shuga. Gwakọta ọkara otu teaspoon nke ginger ọhụrụ, otu teaspoon mmiri, otu ihe ọṅụṅụ lemon na Mint, otu teaspoon mmanụ aṅụ. Rachaa ya ugboro atọ ruo anọ n’ụbọchị.
Mee karọt jam, rie otu ngaji kwa ụbọchị, usoro esi eme jam bụ iji otu kilogram nke karọt dị mma, otu kilogram mmanụ aṅụ na ọkara lita mmiri. Bee karọt ahụ n’ogologo ogologo ma tinye ya na mmiri wee sie obere ọkụ, n’ime ite ọzọ, tinye otu lita mmiri ma sie ya iche. Mgbe karọt gbazere nke ọma, tinye ya na ite ma kpuchie ya na mkpuchi. N’ụbọchị nke abụọ, rie ihe dị ka ngaji abụọ. Na-aṅụ tii fennel na cardamom ugboro atọ n’ụbọchị, ọ na-agwọ ọrịa ahụ.
Wụsa nnu ojii na ya tupu iri nri, ọ na-ewepụ okpomọkụ na afọ na imeju. A na-ejikarị ya eme ihe na jaundice.
Radish bụ akwụkwọ nri bara uru maka ndị ọrịa jaundice, rie ya raw. Na-aṅụ ihe ọṅụṅụ radish jikọtara ya na shuga, akwụkwọ radish dịkwa uru. Were otu paụnd ihe ọṅụṅụ akwụkwọ wee gwakọta ngaji shuga desi abụọ n’ime ya, gbanye ya ma na-aṅụ otu iko kwa ụbọchị maka ụbọchị asaa.
Malathi, fennel na cinnamon, ihe niile atọ, gram atọ, gbanye na ọkara iko mmiri n’abalị, na-asachapụ n’ụtụtụ. Gwakọta ihe ọṅụṅụ radish 50 ml n’ime ya ma ṅụọ ya, n’ụtụtụ, gbanye ihe ndị a na mmiri n’otu ụzọ ahụ na mgbede, mee ihe ọṅụṅụ ma ṅụọ ya.
Richaa akwụkwọ Arjuna n’ite ụrọ na mgbede, gwepịa ya n’ụtụtụ, yọchaa ya na ite dị ọcha ṅụọ, n’ụtụtụ, gbanye akwụkwọ ndị a ọzọ na mmiri, ṅụọ mmiri ha na mgbede, iji ya mee ihe. gwọọ ọrịa.
Were mango asaa na ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ na mmanụ aṅụ were ngaji otu teaspoon na-aṅụ otu teaspoon kwa ụbọchị n’ụtụtụ na mgbede.
Acacia okooko osisi
Mgbe ị kpochara okooko osisi acacia, gwerie ya na arọ ndị Ijipt, rie nri isii kwa ụbọchị n’ụtụtụ na mgbede maka otu izu.
N’abalị, gbanye obere ntụ ọka gram n’ime otu iko mmiri ma gbanye ya n’ụtụtụ.
Fanye ihe ọṅụṅụ nke lemon abụọ ma ọ bụ atọ ma gwakọta ya n’ime mmiri mmiri atọ. Na-aṅụ ya tupu ị lakpuo ụra. Ojiji ya maka ụbọchị anọ ruo ụbọchị ise na-ewepụ ihe mgbaàmà nke jaundice.
Gwakọta ọkara teaspoon mmanụ clonji n’otu iko mmiri ara ehi ma ṅụọ ya tupu ị lakpuo ụra n’abalị.
Bee skwọsh, rie ya ma fesaa mmiri ara ehi.
A na-akpọ mkpụrụ osisi fenugreek metra, gwerie otu paụnd metra na otu paụnd cardamom ọnụ. Were otu teaspoon n’ụtụtụ na mgbede na otu iko mmiri ara ehi.
N’abalị, wepụ ihe dị ka gram iri ise nke mkpụrụ pọmigranet, tinye ya n’ite ígwè dị ọcha, gwakọta ya na mmiri Ijipt n’ụtụtụ, gwerie otu paụnd shuga dị n’ógbè ahụ na otu towel nke fennel n’ime ya, tinye ya na ya. karama agwakọta wee debe ya na anyanwụ. Kalama ahụ tọgbọ chakoo otu ụzọ n’ụzọ anọ. Ahapụla ya otu izu mana nọgide na-ama jijiji.
Ihe ọṅụṅụ okpete na-agwọ ọrịa jaundice, iji ya na-ejikarị eme ihe ọ bụghị nanị na-ewepụ ọrịa ahụ kamakwa ọ na-ewepụ adịghị ike anụ ahụ nke ọ kpatara.
Mmiri ara ehi anya
Acacia bụ osisi na-amịpụta mmiri ara ehi na-acha ọcha mgbe agbajiri akwụkwọ ya ma ọ bụ alaka ya. Tinye mmiri ara ehi atọ a n’ọbụ aka aka nri wee tee ya n’ọbọ ụkwụ aka nri. Mgbe mmiri ara ehi malitere ịrapara, kwụsị ịsa mmiri ma hapụ ya maka nkeji 5. Mgbe ahụ, saa mmiri dị ọhụrụ. Mee otu ihe ahụ na aka ekpe na ụkwụ n’echi ya, mee otu ihe ahụ na aka abụọ na ụkwụ na afo efu, mgbe otu izu ị ga-ekpochapụ odo na nwa jaundice.
Mmiri ara ehi bụ ihe ọṅụṅụ kacha mma maka ọrịa a. Ịtinye nnu, ose oji n’ala na mkpụrụ cumin n’ime otu iko mmiri ara ehi na ịṅụ ya ugboro abụọ n’ụbọchị bara uru.
Tinye ntakịrị nnu na ose ntụ n’otu iko ihe ọṅụṅụ tomato ma ṅụọ ya.Kpọtụrụ Noor Health Life maka ajụjụ na azịza ndị ọzọ. Email na WhatsApp nwere ike inye gị ozi ndụ ahụike ọkụ. noormedlife@gmail.com